Tababar Loo Soo Gabagabeeyay Xirfadlayaal Caafimaad. - Cakaara News
Tababar Loo Soo Gabagabeeyay Xirfadlayaal Caafimaad.
Jigjiga(cakaaranews)talaado, 25ka October, 2016. Tababar ay ujeedadiisu ahayd sidii kor loogu qaadilahaa xirfada daryeelka caafimaadka hooyada ilmuhu ka qubto/ dhiciska oo mudo 12 maalmood ah u socday 19 xirfadlayaal caafimaad oo ka kala socday 19 xarun caafimaad oo ku kala yaala gobolada Faafan, Qoraxay iyo Afdher ayaa maanta loogu soo xidhay hoolka shirarka ee xafiiska caafimaadka DDSI.
Munaasabadii xidhitaanka tababarkan ayaa waxaa ka hadlay wasiirka xafiiska caafimaadka DDSI mudane Xasan Ismaaciil Cali oo sheegay in tababarkani muhiimad wayn u leeyahay xafiiska caafimaadka iyo bulshada DDSI maadaamo oo adeega daryeelka caafimaadka hooyada ilmuhu ka qubto baahi wayn loo qabtay xirfadlayaal caafimaad oo fidiya daryeelkan. wuxuuna sheegay in hooyooyin badan oo anbalaasyadeenu lagu soo gudbin jiray iyaga oo dhiig baxaya qaarka mid ihina dhexda ku dhigan jireen. Waxuuna wasiirku kula dar-daarmay tababartayaashii in ay ciligii iyo waayo aragnimadii ay tababarkan ka heleen ugu adeegaan bulshada.
Waxaa kale oo dhankiisa ka hadlay maareeyaha guud ee mashruuca dhimista dhimashada hooyada iyo dhalaanka ee marka afka qalaad la soo gaabiyo loo yaqaano RIF mudane Shaafici Daahir Muuse oo sheegay in uu tababarkani ahaa dufcadii 2aad ee qaadata tababarka daryeelka hooyada ilmaha uurka soo qubto shanta bilood. Waxaa kale oo uu sheegay maareeyuhu in xarumaha caafimaadka ee ay xirfadlayaashani kala yimaadeen aan hadda ka dib lagu soo gudbindoonin hooyo ilmo ka qubanayo oo ay halkaasi ku maarayndoonaan caafimaadkeeda kaasina kaalin muhiim ah ka qaadan doonto dadaalka loogu jiro dhimista dhimashada hooyada iyo dhalaanka. Maareeyaha ayaa intaasi ku daray in mudadii uu tababarkani u socday xirfadalaashan caafimaad uu aqoon iswaydaari u tageen magaalooyinka harar iyo haramaayo.
Gabagabadii tababarkan ayaa waxa uu wasiirka caafimaadka DDSI gudoonsiiyay shahaadooyin ka turjimada cashiradii ay ku barteen mudadii uu tababarku u socday xirfadlayaashan caafimaadka.